Manana fifandraisana matotra Darling
Misy fifandraisana lehibe dia fifandraisana izay miorina tsikelikely, fa izay tsy foana ny fanaraha-maso, izay indraindray mety mampitahotra. Na izany aza, amin’ny fo isika, fantatsika izany, isika, mahatsapa ny fanahy hitarika antsika, ary ny sasany ny famantarana aza mamitaka.
ireny antsipirihany ireny hamadika matetika manokana miraiki-po ary ny manomboka ny fifandraisana lehibe.
Avy eo dia jereo ny fientanam-po ireo fotoana voalohany eto dia vitsy ny fitsipika fototra
Izany dia tsy hampianatra anareo ny zavatra rehetra, manantena ny hihaona ny antsasaky dia mila hihaona izao tontolo izao ary noho izany dia ilaina mba hahazoana avy! Na dia, fa ndao hatrehina izany, ny cocoon ny mahazatra dia afaka ny ho indraindray ny tena aina, dia tokony avy ao an-tsesitany. Toy ny hoe ny iray ny toerana tena ny mpilalao sarimihetsika, Catherine Deneuve: ‘ny namana, toy ny fitiavana, dia mitaky be dia be ny ezaka, ny saina, constancy, dia mitaky mihoatra noho izay rehetra mahalala ny fomba manolotra inona no tena malala eo amin’ny fiainana: ny fotoana!’. Ka handeha, hihetsika, misokatra, raha tsy misy succumbing ho trotraka, noho izany dia zava-dehibe ihany koa hahatsapa ny tsara sy tanteraka mba hisarihana tokan-tena, ary angamba hanaovana ny fivoriana dia nisy lehilahy iray na vehivavy iray. Maka, indraindray, misotro araka ny asany, hisoratra anarana ao ny fanatanjahan-tena fikambanana, ary mampiaraka toerana (na maimaim-poana na ny karama), izay mety hizara izany amin’ny hafa.
izay mety ho efa tsara ny dingana voalohany
Faharetana, ny tena tanjona dia ny fifanakalozana sy mba hanatsarana ny tenanao teo ny mikasika ny hafa, noho izany dia miteraka ny tsara indrindra tantara. Tsy lazaina intsony fa ny fifandraisana matotra dia tsy naorina tao anatn’ny ny rantsan-tànany, mila fotoana, ny faharetana, ary»valifaty». Na izany aza, rehefa misy fifandraisana lehibe vokatry ny farany, izy mitondra antsika loatra izany, amin’ny jery todika, ireo rehetra ireo ezaka ireo dia mendrika izany. Io no vahaolana sahaza ho an’ny rehetra, ary indrindra ho an ireo izay, na teo aza izany rehetra ny tsara dia, tsy manana be dia be ny fotoana malalaka ary na dia tsy mahatsiaro ho mahazo aina tsara ny hevitra hoe miresaka ny tenany ny olona vaovao, toy ny ao amin’ny fikambanana fivoriana ohatra. Maro ny azo atao dia atolotra ho anao, anao afaka, ohatra, tonga ny fifanakalozana traikefa eo amin’ny mampiaraka toerana Darling. Dia ho nanatitra ny fahafahana nihaona mety ho mpiara-miasa izay afaka hifanakalo hevitra sy izay mitovy fanantenana ho anao. Azonao atao ihany koa ny miresaka amin’ny iray azo itokisana ny tontolo iainana, ary farany niresaka ny mety hisian’ny fifandraisana lehibe, na hahita ny tsara indrindra amin’izy ireo, na ny fitiavana ny fiainana! Ka tsy andriko intsony, ny handray andraikitra noho izany dia ianao izay mihazona ny fanalahidy ny ho avy! Masìna ianao, aza misalasala mba hahatonga ny fiovana izay te-hahita hitranga! Kely ny herim-po, ny faharetana ary ny fahatokiana, dia tonga vokatra lehibe. Ity lahatsoratra ity dia efa voasoratra ho anao amin ny tonian-dahatsoratry ny hany Malalako France Vakio ny fanekem-ny matoan-dahatsoratra Darling
← Chat ao Frantsa
Trandrahana ny fitiavana →